ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 7/1/09 - 8/1/09
အားအားရှိတော့ ဒါလေးတွေ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..
Machine Translation ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ကို အသုံးပြုပြီး ဘာသာစကား တစ်မျိုးမှ တစ်မျိုးသို့ အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်ဆိုစေသော စနစ်ကို ဆိုလိုသည်။
မူရင်း ကိုညီလင်းဆက် ဆိုဒ်မှာ စုံပါတယ် ။
ဒီလင့်ကနေသွားပေါ့ ။ http://blog.nyilynnseck.com/search/label/NLP
ဗဟုသုတပေါ့.. မြန်မာဘာသာ အနေနဲ့ အဲဒီလို ကွန်ပျူတာသုံး ဘာသာပြန်ခြင်း စနစ် ပေါ်လာမယ်ဆို ဘာသာပေါင်းစုံက ၀တ္တုတွေ ၊ နည်ပညာ ဆောင်းပါးတွေ စက်နဲ့ဘာသာပြန်ပီး ထိုင်ဖတ်ပစ်လိုက်မယ် ။
၁။ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဇောဂျီဖောင့် ဒေရှင်နရီ http://www.ornagai.com/
၂။ ရဟူး ဘာသာပြန်တဲ့ စနစ်လေး ဘာသာပေါင်းစုံ http://babelfish.yahoo.com/အဲဒီမှာ Use correct spelling, grammar, and punctuation for the highest quality translations. အဲလိုရေးထားတယ်။
DatE Friday, July 24, 2009 LaveL ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ0comments link this
အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ ။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် အာဇာနည် အပေါင်းအား လေးစားဂုဏ်ယူလျှက် ။
DatE Saturday, July 18, 2009 LaveL အာဇာနည်နေ့0comments link this
ရှုတိုင်းလှသည့် အညာဒေသ သဘာဝ။
“တကူကူး ခါးခါး” … “တကူကူး ခါးခါး” တဲ့
ငှက်တစ်ကောင်က ရော့ဂီတ ဟစ်ဆိုတယ်။
“တကူကူး….ကူး…” “တကူကူး…..ကူး…” တဲ့
စလိုးရော့ ဂီတကို ချိုးငှက်က ဖန်တီးတယ်။
လူသူ အလစ်မှာ ဟိုဒီ ပျံသန်းရင်း
“ရွှီး……....ပြုံ..” “ရွှီး……....ပြုံ..” တဲ့
ငှက်ငယ်လေးက လေတမြမြ ချွန်လို့
လစ်ဟာနေတဲ့ ဂီတစီးချက်ကို ဖြည့်စွက်လိုက်ပြန်တယ်။
များလှတဲ့ ဇရက် ငှက်ငယ်တို့ရယ်
ကျလိ. ကျလိ. ကျွိကျွိကျွိ …ကျလိ. ကျလိ. ကျွိကျွိကျွိ … တဲ့
ခေတ်သစ် ဟစ်ဟော့ လေလား ထင်မိမှား၏ ။
မန်ကျီး ပင်တို့ စိမ်းညို့ညို့
ထန်းပင်တော နှင့် ခင်တန်းငယ်
ရှစ်ခွင် မှိုင်းမြ ရှုတိုင်းလှသည့်
အညာဒေသ သဘာဝ။ ။
DatE Friday, July 17, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
Forward mail တစ်ခုကို ပို့စ် အဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။ အရမ်း နှစ်သက်မိပါတယ်။ ပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒီ ဇာတ်လမ်းလေး ကြည့်ပြီး ရွာက အဖေ့ကို အရမ်းသတိရမိတယ်။ ငယ်ငယ်က အဖေ့အပေါ် အမြင်မှားတွေ ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ အဖေ့ဘ၀ တော်တော် ရုန်းကန်ခဲ့မှန်း သိနားလည်ခဲ့ တယ်။ ကျေးဇူးတွေ ကြီးလှပါတယ်။
ဘလော့ဂါ အကို အမတွေ ကြည့်ဖူးပြီး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..ထပ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်။
DatE Wednesday, July 15, 2009 LaveL video0comments link this
>> ကျောက်ပန်းတောင်းသား ကိုအောင်မျိုးမင်း ၏ ရင်တွင်းဖြစ်လေးပါ <<
DatE Monday, July 13, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
DatE Wednesday, July 08, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
မြန်မာပြည်မှာ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ စကားပြောကြတာ မတူ ကွဲပြား ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်မွေးရပ်မြေဒေသမှာ ထူးထူးခြားခြား သုံးတဲ့ စကားလုံး တွေရှိပါတယ်။ အင်္က္ခရာ သ နဲ့ တ ပီသအောင် မပြောတတ် တာကတော့ စာဖွဲ့စ၇ာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ထူးခြားတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး က ဘာလဲဆို တော့ “မနက်ကြီး” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။ နံနက် စောစော အာရုံတက် နေမထွက်ခင် အချိန်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်းအချက် ပြောကြ တဲ့အခါ “ ဟေ့.. မနက်ကြီး ကျရင် ရွာထိပ်မှာ လူစုမယ် ..” အဲလို ပြောကြ တယ်။ မနက်လေး တော့ မရှိပါဘူး။
နောက်တခု ရှိသေးတယ်.. ဆန်ချိန်တဲ့ နို့ဆီဗူးကို ပိတောက် လို့ခေါ်ပါတယ်။ နို့ဆီဗူး ရှစ်လုံး တစ်ပြီ လို့ ငယ်ငယ်က သင်ရပေမယ့် ပိတောက် ဆိုတဲ့ အခေါ်ပဲ နှုတ်ကျိုးနေတယ်။ ထမင်းချက်ရင် အမေရေ.. ဘယ်နှစ်ပိတောက် ချက်ရမလဲ လို့ အော်မေးတဲ့အကျင့်က ပြန်သွားလဲ မပြောက်တော့ဘူး။ ဗူး = ပိတောက် ပါ။
အခန်းမှာ တူတူနေတဲ့ အထဲမှာ မွန် ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာစကား သိပ်မတတ်ရှာဘူး။ အမှတ်မထင် ပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးတွေဆို မျက်စေ့ တောင် လည်သွားတယ်။ ညပိုင်း ထမင်းစားအပြီးမှာ “.. ဟ ..ဘယ်ကိုက်မလဲ .. ထမင်းစားရတာ လည်ပင်း မထိဘူး..” တဲ့ ။ ပြောချင်တာက ခံတွင်းမတွေ့ ဘူး.. အရသာ မရှိဘူး ပြောချင်တာပါ။
မိတ္ထီလာမှာနေခဲ့စဉ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့။ ချစ် ကို ပီသအောင် မပြောတတ်ဘူး။ ချစ်တယ် လို့ ပြောရင် ရှစ်တယ် လို့ပဲ အသံထွက်တယ်။ အ၇မ်းရယ်ရပါတယ်..သူ ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကား ပြောပါတယ်.. အရှစ်ရယ်...ကိုယ်မင်းကို အရမ်း ရှစ်တယ် ကွာ တဲ့..။ ကဲ.. ဘယ့်နဲရှိစ။ အခုဆို သူ ရှစ်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ပေါင်းဖက်လို့ ကလေး ၂ ယောက် တောင် တော်တော် ကြီးနေပီ။
DatE Saturday, July 04, 2009 LaveL ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ0comments link this
သံရုံး တစ်ခေါက် ရောက်ခဲ့သည်
29 June, 2009 နေ့ နံနက်
နံနက် အစောကြီး အောချတ် လမ်းမကြီးမှာ လမ်းလျှောက်လို့ ကောင်းတာ အခုမှ သိတယ်။
ဘူတာက ထွက်လိုက်တာနဲ့ ယဉ်ကျောကို မျက်နှာမူ ပြီး လျှောက်တယ်.. သံရုံးထိအောင်ပဲ။
လေညင်းလေးတွေ က မျက်နှာကို ထိတော့ တကယ်ကို အမောပြေသွားတယ်။
လမ်းလျှောက်ရတာလဲ တော်တော်လေး အရသာ ရှိတယ်။ ဖိနပ် နဲ့ ကျောက်ခင်လမ်း မထိဘူး လို့ ထင်ရတယ်။
မီးတိုင်လေးတွေ ထွန်းထားတာကလဲ ကဗျာဆန်ပါတယ်။ လမ်းဘေးမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေလဲ ရှိတယ်.. မီးရောင်စုံတွေထက် စွတ်စွတ်ဖြူတဲ့ မီးလုံးတွေက ပိုပြီး အသက်ဝင်သလိုပဲ ခံစားရတယ်။
ပထမဆုံး ထွက်တဲ့ ရထားပဲ။ ပိုင်အိုနီးယား ကနေ ရထား စထွက်တော့ ရထားပေါ်မှာ လူတချို့ပဲတွေ့ရတယ်။ ဘူတာ မှတ်တိုင်တွေ တခုပြီးတခု ဖြတ်ပြီး တာနဲ့ ရထားထဲမှာ လူတွေ ရောက်လာကြတယ်။ သေချာ ကြည့်မိတော့ သက်ကြီးပိုင်း တွေများတယ်။ အ၀တ်စား ၀တ်ထားတာတွေက ငယ်ငယ်က ၀တ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်စားတွေ လို့ထင်ရတယ်။ ဘေးနားက လူကြီးတစ်ယောက်က ပုံစံကတော့ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံပဲ။ အသက် ၅၅ နှစ် ကျော် လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ ဒီလိုပဲ ရထားကို စီးနေကျထင်ပါရဲ့။ တက်လာတဲ့ သူတွေကို နှုတ်ဆက်တယ်။ ဆင်းသွားတဲ့သူတွေကိုလဲ နှုတ်ဆက်တယ်။ မာန်မာန ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ နွေးထွေးမှု တခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
သံရုံး ရောက်တော့ တံခါးဝမှာ အိပ်ပြီး စောင့်နေသူတွေ ၊ ငုတ်တုတ် မတ်တတ် တွေ တွေ့ရပါတယ်။ နာမည် စာရင်း ဖြည့်မယ်ကြည့်တော့ အမှတ်စဉ် ၃၆ မြောက်မှာ နေရာရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၈ နာရီထိစောင့်ရင်း တဖွဲဖွဲနဲ့ ပိုက်စံ ပေးမယ့် သူတွေရောက်လာကြတယ်။ လူတစ်ရာ ကျော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖြူ ဖြူ မဲမဲ ပုပု ကွကွ ရှည်ရှည် ကျားကျား မမ စုံလို့ပေါ့။ ပတ်စပို့ ရယ် ပါမစ်ရယ် မိတ္တူ ကူးလို့ ထိုင်စောင့်နေရသေး။ ၉ နာရီမှာ စတင်ကာ စာရွက် စာတမ်း များ လက်ခံပါတယ်။ အဖွားကြီး၏ ချိုသာသော မြန်မာ စကားများအား နားထောင်ရင်း သည်းငြီးခံ ကာစောင့်ဆိုင်းလို့ ၁၁ ကျော်မှာ ကိစ္စပြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟူး……....၀ူ…………… လေပူတချက် မှုတ်ထုတ်ကာ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းထွက်ခဲ့ပါတယ်…
အပြန်ရထားထဲမှာ ကျတော့ နံနက် စောစော က ရထားနဲ မတူဘူး။ ပလူးပလဲ အတွဲ တွေလဲ တွေ့ရတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရထားပိုင်ရှင်လို မျက်နှာတွေလဲတွေ့ရတယ်။ စင်္ကပူရီးယန်း ဆိုတဲ့ အထာတွေနဲ့ ဘ၀င်လေဟပ် နေသူတွေ အလုပ်ပဲ များသရောင် အိုက်တင်နဲ့ အချင်းချင်းလဲ စကားမပြောကြဘူး။ မျက်နှာကြီး မျိုးတွေထင်ပါရဲ့။ ဘယ်သူမှ မသိဘူး အပိုင်ပဲ ဆိုပြီး အတင်းတုတ်တဲ့ ရွှေတွေလဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဗိုက်ကြီးသည် လာလို့မှ နေရာပေး ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ သူတွေလဲတွေ့ရပါတယ်။ ရထားတွဲချင်း တူပေမယ့် မတူဘူးရယ်။ အဲယားကွန်း က အေးနေပေမယ့် နံနက်စောစောက ရထားထဲကလို နွေးထွေးမှုမျိုး မတွေ့ရတော့ဘူး။
DatE Thursday, July 02, 2009 LaveL personal0comments link this